Askari Ka Tirsan Ciidanka DF oo Shalaambood Ku Dilay Qof Hooyo Ah Markey Ka Diiday Inuu Kufasado. – Shabakadda Amiirnuur
Askari Ka Tirsan Ciidanka DF oo Shalaambood Ku Dilay Qof Hooyo Ah Markey Ka Diiday Inuu Kufasado.
January 11, 2019 6:50 pm by admin Views: 67
Dhacdo aad u naxdin badan ayaa maanta oo jimco ahayd ka dhacday meel u dhow degaanka Shalaambood ee gobolka Shabeelaha Hoose, ka dib markii askari ka tirsan ciidamada DF uu si bareer ah u dilay qof hooyo ah.
Askarigan oo ka yimid dhanka Ceel Jaalle ayaa hooyadan ku helay meel cidlo ah waxaana uu ka dalbaday inuu kufsado balse iyadu waa ay ka diiday waxaana ay kula dagaalantay seef ay sidatay taasoo keentay inuu laba xabadood ku dhufto.
Hooyadan oo la oran jiray Ambiyo Xassan Cali ayaa u geeriyootay rasaastii uu ku dhiftay askariga, sida uu saxaafadda u xaqiijiyay seygeeda oo lagu magacaabo Cismaan Cabdi Cali. Cismaan ayaa sheegay in Marwadiisii Ambiyo loo dilay si arxan darro ah uuna aad uga naxay markii loo soo sheegay isagoo jooga Muqdisho.
Safar degdeg ah ayuu soo galay wuxuuna nasiib u yeeshay inuu wax ka aaso xilligii casar liiqii. Wuxuu inoo sheegay in Ambiyo uu guursaday 15 sano ka hor, da’ ahaanna ay ahayd qof 40 sano jir ah islamarkaana u dhashay laba gabdhood oo midda ugu yar ah hadda qaan gaarnimada sannad ku darsatay.
Ciidamada DF ayaa waxaa tababaray shisheeye dhaqankoodu ku saleysan yahay kufsi iyo anshax darro waana midda keentay in ay kufsadaan haweenka Soomaaliyeed, yar iyo weyn. Qofkii ka diidana ay xaq darradaas ku toogtaan.
Hooyo Ambiyo Alle ha u naxariisto’e waxay cirdigeeda oo lagu xad gudbo ka dooratay in la dilo iyadoo daahir ah oo ka dhowrsoon nijaasta askarigaas, waxaana suura gal ah iney jiraan dumar kale oo intey geerida ka baqeen la kulmay dhibaayooyin badan kadibna iska qarsaday, xilli la og yahay in cudurka Aidiska lagu faafinayo wadanka.